Ny andraikitry ny tsirairay amin’ny fanadiovana ny renivohitra
auteur may 30, 2014 Commentaires fermés
Tapitra izay ny roa volana napetraky ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo hanesorana tanteraka ny fako eto an-drenivohitra. Hampahatsiahivina fa ny fanalàna ny fako ao anatin’ny roa volana no vinan’asa voalohany napetraky ny Filohan’ny Delegasiona Manokana
Fiaraha-miasan’ny Fitondram-panjakana – CUA- FER- MINTP
auteur may 20, 2014 Commentaires fermés
Noho ny fiara miasan’ny Fitondram-panjakana, ny Ministeran’ny Asa vaventy, ny Fond d’Entrerien Routier (FER) ary ny Commune Urbaine Antananarivo (CUA), dia misy ny fiaraha-misalahy eo amin’ ny telo tonta mikasika ny Fanamboaran-dalana eto Antananarivo
Fiaraha-miasan’ny Kaominina sy ny Guanomad
administrateur may 16, 2014 0
Vita sonia ny Alatsinainy 28 avrily lasa teo tetsy amin’ny Lapan’ny tananan’antananarivo renivohitra ny fifanarahana teo amin’ny fiadidiana ny tananan’antananarivo renivohitra sy ny orinasa Guanomad. Ny filohan’ny Delegasiona manokana mitarika ny tananan’Antananarivo renivohitra Ny
Ady amin’ny fifohana sy fidorohana zava-mahadomelina
Mazàna ny fifohana sigara, na fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana alikaola, dia fitaovana ataon’ny mpitia sy mpandala azy ho fanalana sorisory, fialamboly, ary fanadinoina ny vesatry ny fiainana. Rehefa tafaraka amin’ny toerana iray ny
Asa sosialy maro no sahanin’ny Fiadidiana ny Tanànan’ Antananarivo ary mahazo tombotsoa avokoa ny mponina, indrindra ireo vahoaka sahirana. Ny Bureau Municipale d’Hygiène (BMH) Isotry ohatra, dia misokatra ho an’ny rehetra. Etsy an-daniny, ny
Fanamboaran-dàlana: anisan’ireo vinan’asa sivin’ny Kaominina
administrateur aprily 20, 2014 0
Vinan’asa sivy no entina handaminana ny tanànan’Antananarivo renivohitra ao anatin’ny 6 na 7 volana. Fohy ezaka no fotoana hanatanterahana izany ,izay mitaky fanaovana dingan-dava. Efa hita soritra amin’izao fotoana ny fiovana, raha eo amin’ny
« First‹ Previous666768